October 3, 2021 - Babal Khabar
Oct32021 by बबाल खबरNo Comments
अनौठो रुख ! जहाँ पैसा फल्छ, थाहा पाउनुहोस् कहिल्यै नदेखेको र नसुनेको यो रुखको रोचक रहस्य
सबैभन्दा पहिले यो भिडियो, पैसा फल्ने रुख तपाईले कहिल्यै देख्नुभएको छ ? पैसा रुखमा फल्दैन भन्ने कुराको अपवादको रुपमा रहेको रुख बेलायतको पीक जिल्लामा रहेको छ । १७०० वर्ष पुरानो हो र यो रुखभरी हजारौंको संख्यामा सिक्का गाडिएका छन् । खास कुरा त के भने यहाँ बेलायती मात्रै होइन संसारका हरेक देशका सिक्का जोडिएका कारण यो रुख बहुमूल्य बन्दै गइरहेको छ ।यो रुखमा सिक्का लगाउँदा सुख शान्ति आउने र मनोकामना पूरा हुने विश्वासका साथ दिनानुदिन सिक्का खोप्नेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । वेल्स राज्यको पोर्टमोरियन गाउँमा भएको यो रुख चर्चित पर्यटकीय स्थल बनिसकेको छ जहाँ यो रुखलाई हेर्नकै लागी भनेर दैनिक कैयौँ पर्यटक जाने गर्दछन् । यस्तै अर्को खबर पढनुस प्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरू कुन देशका नागरिक हुन्छन् होला ? काठमाडाैँ । हामी धेरैले प्लेनमा नै बच्चाको जन्म भएको सुनेका छैनाैँ होला, तर कतिपय भने यस्ता
प्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरू कुन देशका नागरिक हुन्छन् होला ? यस्तो छ नियम
प्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरू कुन देशका नागरिक हुन्छन् होला ? हेर्नुस भिडियो, काठमाडाैँ । हामी धेरैले प्लेनमा नै बच्चाको जन्म भएको सुनेका छैनाैँ होला, तर कतिपय भने यस्ता घटनाको प्रत्यक्षदर्शी समेत भएका पनि हुन सक्छाैँ ।यदी प्लेनमा बच्चा जन्मिएमा उक्त बच्चा कुन देशको नागरिक हुन्छन् त ? यो कुरा हामी धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।विश्वका धेरै देशहरूमा प्लेनमा यात्रा गर्ने विभिन्न नियम बनाएका छन् । उदाहरणका लागि भारतमा ७ महिनाभन्दा धेरै समयकी ग’र्भवति महिलाले प्लेनमा यात्रा गर्न नपाउने नियम छ । यद्यपी महत्वपूर्ण अवस्थाका लागि यो नियम ल’चिलो छ । यदी प्लेन उडीरहेको बेलामा महिलाले बच्चालाई जन्म दिएको खण्डमा उक्त प्लेन कुन देशको आकाशमा उडीरहेको छ भन्ने पहिलो शर्त हुनेछ ।र उक्त प्लेन जुन देशमा ल्याण्ड हुन्छ सोही देशको एयरपोर्टबाट बच्चाको जन्मदर्ता लगायतका कागजातहरू बनाइन्छ । यस्तो नियम भएता पनि ब
यी हुन् भीआईपी, मन्त्रीदेखि सांसद सम्मको कोठामा बास बस्ने: एक रातको रेट…!
भिडियो खबर, नारी च’रित्र दैव न जाने अर्थातस्त्री जातिको चरित्र भगवानालाई पनि थाहा हुँदैन। यसको शि कार नेपालका धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरु भएका छन्।यसमा पछिल्लो समय निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महराको नाम चर्चामा रहेको छ। उनले आफ्नै एक महिला कर्मचारीमाथि जबरजस्ती गरेको आरोपमा पद मात्रै गु’माउनु परेन्, संगै भएको इ’ज्जत र प्रतिष्ठा पनि समाप्त हुन पुग्यो। उनी अहिले जेल सजाय भोगिरहेका छन्। यस्तै एक घ’टना पाकिस्तानबाट पनि बाहिर आएको छ। अहिलेका पाकिस्तानी रेलमन्त्री शेख रशीद र टिकटक स्टार हरीम शाहले रातीको समयमा केही कुराहरु गरेको भिडियो बाहिर आएको छ।उनीहरुले खुलमखुल्ला च्याटमा कुरा गरिरहेको देख्न सकिन्छ । यो भिडियो अहिले पाकिस्तानमा मात्रै नभई विश्वभर भा इरल भइरहेको छ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,, हरीमका अनुसार मन्त्री रशीदले उनीसँग पहिले ना ङ्गो भ एर अ श्ली ल भिडि यो कल पनि
महिलाले ब्रा र पे ‘न्टी नै लगाउन नपाइने देश !
हेर्नुस भिडियो, स माचारको शीर्षक पढ्दैमा तपाइँ छक्क पर्नुभयो होला । अहिलेको दुनियामा यस्ता देशपनि छन् जहाँ महिलाले ब्रा तथा पे न्टी समेत लगाउन पाउँदैनन् भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रै पर्छ । तर विश्वमा यस्ता देशको कमी छैन जहाँ अझैपनि महिलाहरु निकै तल्लो स्तरको जिवन बाँच्न बाध्य छन् र उनीहरुको स्वतन्त्रता छिनिएको छ । न त उनीहरुलाई आफ्नो इच्छा अनुसार खाने स्वतन्त्रता छ, न त कपडा लगाउने, घुम्ने र बोल्ने नै । यति भनिसकेपछि महिलाहरुले भि त्री वस्त्र लगाउन नपाउने कानून नि श्चय पनि गरीब तथा पि छडि एका कुनै देशहरुमा होला भन्ने लख का ट्नु भयो होला । तर होइन । भिडियो, दुनियाको सबैभन्दा धनी तथा विकशित र शक्तिशाली देश अमेरिकामै यस्तो कानून रहेछ । अमेरिकाको मिसौरी राज्यमा यस्तो कानून छ, जसले महिलाहरुलाई भित्री वस्त्र लगाउन बन्देज गरेको छ । मिसौरीको कानूनले महिलाहरुलाई भित्री व स्त्र लगाउन
‘मेरो छोराले धेरै ला’गुऔ’ष’ध र यौ’ न अनुभव गर्नु पर्छ ’ भनेका थिय शाहरुख खानले ! अहिले पर्यो यस्तो अापत्
एजेन्सी । सुपरस्टार भारतीय नायक शाहरुख खानका छोरा आर्यन खान क्रुज ड्र'ग्स प्रकरणमा संलग्न भएको पाइएको छ । यसैबीच शाहरुख खानले छोराको बारेमा भनेको भनाइ चर्चा छ । उनले आफ्नो छोराको बारेमा ठट्टा गदैं भनेका छन्, ‘मेरो छोराले धेरै ला'गुऔ'षध र यौ' न अनुभव गर्नु पर्छ ।’ शाहरुख खानले १९९७ मा श्रीमती गौरी खानसंग सिमी ग्रेवालको शो मा गएका थिए । त्यसबेला उनले ठट्टा गर्दै भनेका थिए, ‘उनको छोराले ती सबै कामहरु गर्नु पर्छ जुन उनी आफ्नो युवा वस्थामा गर्न सक्दैनन् । शाहरुखले भनेका थिए, ’म चाहन्छु मेरो छोरो केटीहरुसँग डेट गरोस्, से'क्स र ड्र'ग्सको आनन्द लिनुहोस् । उनी नराम्रो केटा बन्छन् र यदि उनी राम्रो केटा जस्तो देखिन थाल्छन् । म उसलाई घरबाट बाहिर नि'कालि'दिन्छु । अहिले शाहरुख खान भनेको उक्त ठट्टा सोशल मिडिया मा भा'इरल बनिरहेको छ । आर्यन खानलाई एनसीबीले क्रु'ज ड्र'ग्स पा'र्टीमा सं'लग्न